Amarobhothi ekhishi - iyiphi okufanele ngiyikhethe, amamodeli nezinzuzo? | Bezzia
Ngomunye wemibuzo esingazibuza yona kakhulu futhi ukuthi miningi futhi yehlukahlukene amarobhothi ekhishini esinayo emakethe. Ngakho-ke, kwesinye isikhathi kuba nzima kithina ukukhetha eyodwa. Asazi ukuthi yini okufanele siyibheke ngaphambi kokwethula kuyo, ngakho-ke namuhla sizokusiza.
Sizokunikeza izeluleko ezinhle kakhulu futhi nayo yonke imininingwane eqondile ukuze ukukhetha kwakho kube okungcono kakhulu kwezidingo zakho. Ngoba akusithina sonke esinezinto ezifanayo, kepha sifuna ukuthenga okuhle nokuhlala njalo. Ngakho-ke, nisezandleni ezihamba phambili futhi manje sizonikhombisa.
1 Iyiphi irobhothi engcono kakhulu yokupheka
2 Yini irobhothi lasekhishini elithengiswa kakhulu
3 Ziyini izinzuzo zamarobhothi asekhishini
Iyiphi irobhothi engcono kakhulu yokupheka
Ngaphandle kokungabaza kunemikhiqizo eminingi namamodeli amaningi onawo emakethe. Kepha kuzo zonke, kufanele uhlale ucabanga ngezinyathelo ezimbalwa ngaphambi kokuzithenga. Ngoba kuliqiniso ukuthi banezinzuzo ezinhle kepha lezi kufanele zivumelane nempilo yethu.
Umthamo wemishini yethu yasekhishini ungenye yamaphuzu ayisisekelo. Ngoba lokhu sizokuhlola ngokwama-diners esiyikho. Uma imvamisa kungabantu abane okudliwayo, ngeke kufane endlini ukuthi kuhlala ababili noma mhlawumbe oyedwa kuphela. Ngakho unamamodeli amabili amalitha kanye namalitha ama-5.
Amandla ngamanye amaphuzu abalulekile. Ngoba amandla amaningi afana namandla athe xaxa nokuthi azohlala isikhathi eside futhi kube nemiphumela engcono. Abanye banamandla angu-500W, kanti abanye badlula i-1000W ngokude.
Imisebenzi enayo ingenye yemibono okufanele ibhekwe. Ngoba eminye inemisebenzi efinyelela ku-12 kanti eminye ingaphezu kuka-8. Into enhle ukwazi ukuthi ikuphi okuletha futhi ucabange ukuthi kuzoza nazo kuye ngezitsha ojwayele ukuzilungisa. Amamodeli ayisisekelo asevele anemisebenzi esemqoka futhi edingekayo.
Lapho benemisebenzi eminingi, izesekeli eziningi abazophinde bazinikeze ukubasiza.
Kufanele uqiniseke ukuthi izingxenye nezesekeli kulula ukuzihlanza noma ukuthi zingaya kumshini wokuwasha izitsha., njalo ukonga isikhathi.
Yini irobhothi lasekhishini elithengiswa kakhulu
Uma uzibuza ukuthi iliphi irobhothi lasekhishini elihamba phambili, asikwazanga ukukuphendula ngeyodwa nje ngoba kunezindlela eziningi ezikhomba lokho. Kepha kukhona abanye abazibeke njengamarobhothi athengiswa kakhulu e-Amazon.
Indawo yokuqala iya kurobhothi iCecotec Mambo Inemisebenzi engama-30, umthamo wamalitha angu-3,3, kanye nencwadi yokupheka futhi i-daishisher iphephile. Uma udinga umsizi omuhle, sicela ungangabazi ukuyithenga lapha.
Kunjalo uma usafuna ukonga imali ethe xaxa kepha unezinketho ezinhle eceleni kwakho, kukhona le modeli ongayibona lapha nalena enye ethengiswayo lapha ngokufanayo. Owokuqala nge-900W nemisebenzi edingeka kakhulu, kanti owesibili unamamenyu angu-8 alungiselelwe kusengaphambili namalitha ayi-5 womthamo.
La sha Moulinex Futhi inamamodeli amaningi wamarobhothi asekhishini azimise phakathi kwabathengisa kakhulu. Enye yazo yile enamalitha angu-3,6 wamandla, kanye nencwadi yokupheka nezinhlelo ezi-5 ezizenzakalelayo esizitholile lapha.
Ziyini izinzuzo zamarobhothi asekhishini
Sesibonile ukuthi yini okufanele siyibheke lapho siyithenga, kanye namanye amamodeli athengisa kakhulu. Yebo, ukwazi konke lokhu, kusale ukugxila kuzinzuzo.
Basigcinela isikhathi ekhishini, ngoba zihlelwe futhi zizowenza wonke umsebenzi ngaphandle kwesidingo sokuthi silinde.
Kokubili izinga lokushisa nesikhathi kulawulwa okulingana nomphumela ongcono.
Zinezincwadi zokupheka ezisisiza ukulungisa izitsha ngezindlela ezahlukene.
Uma usuqedile, ngeke ube nokuningi ukuhlanza futhi ikhishi lakho lizoba ngcono ngokwedlulele njalo.
Zinamandla futhi ngokuya ziba nomklamo ohlangene ngakho-ke abathathi isikhala esiningi kakhulu.
Impela ngemuva kwakho konke lokhu, uzobe ubanikeze ukuqhubekela phambili kokukuhlanganisa nosuku nosuku lwakho! Imishini yasekhishini izokusiza ngaso sonke isikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ukupheka » Amarobhothi ekhishi, iyiphi okufanele ngiyikhethe?